China Vertical high power 808 755 1064 fifangaroan-onja mifangaro amin'ny esoprano soprano es dioda fanesorana volo laser DY-DL501 Manamboatra sy Factory | Danye
Amin'ny maha vahaolana mitambatra azy, ny sehatra Eos-ice dia manambatra ny tombotsoan'ny halavan'ny 3 halavany rehetra, hahazoana vokatra tsara amin'ny fomba lava-lava halavan'ny lava-lava.
Ho an'ny karazana volo sy loko miloko indrindra.
Ny halavan'ny halavan'ny Alexandrite dia manome ny fitrandrahana angovo mahery vaika kokoa avy amin'ny chromophore melanin, izay mahatonga azy io ho an'ny karazana volo sy loko miloko indrindra indrindra ny volo miloko maivana sy manify. Miaraka amin'ny fidirana ambonimbony kokoa, ny halavan'ny halavan'ny 755nm dia mikendry ny Bulge ny follicle volo ary tena mandaitra amin'ny volo miharo volo amin'ny faritra toy ny volomaso sy ny molotra ambony.(2) HERINANDRO 808NM SAINGA
Antsasaky ny fotoana fitsaboana
Ny halavan'ny halavan'ny kilasy amin'ny fanesorana ny volo laser, ny halavan'ny 808nm, dia manolotra fidirana lalina amin'ny follicle volo miaraka amin'ny hery antonony avo lenta, tahan'ny famerimberenana avo ary habe amin'ny toerana lehibe hanaovana fitsaboana haingana. Ny 808nm dia manana haavon-tsiranoka melanin antonony ka mahatonga azy io ho azo antoka amin'ny karazan-koditra mainty kokoa. Ny fahaizany miditra lalina dia kendrena ny Bulge sy Bulb an'ny follicle volo raha ny fidirana amin'ny halalin'ny sela kosa dia mety amin'ny fitsaboana ny sandry, ny tongotra, ny takolaka ary ny volombava.
Manokana ho an'ny karazana hoditra mainty kokoa.
Ny halavan'ny halavan'ny YAG 1064 dia miavaka amin'ny fidiran'ny melanin ambany, ka mahatonga azy io ho vahaolana mifantoka amin'ireo karazana hoditra maizina kokoa. Mandritra izany fotoana izany, ny 1064nm dia manome ny fidirana lalina indrindra amin'ny folikelin'ny volo, ahafahany mikendry ny Bulb sy Papilla, ary koa mitsabo ny volo mipetaka lalina any amin'ny faritra toy ny hodi-doha, lavadavaka ary faritra pubic. Miaraka amin'ny fidiran'ny rano avo kokoa miteraka hafanana avo kokoa, ny fampidirana ny halavan'ny 1064nm dia mampitombo ny mombamomba ny fitsaboana amin'ny laser ankapobeny ho an'ny fanesorana volo mahomby indrindra.
Laser karazana Laser Diode Alemana
Teo aloha: 2020 Kavina sy cryolipolysis vaovao vaovao 360 mampihena ny vatana DY-Magia3
Manaraka: Portable 808 755 1064 onja mifangaro ny milina fanesorana volo laser profesionalista DY-DL1A
Ny salon dia mankasitraka ny iode miisa telo mifangaro ...